PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-11 - UMissy Elliot uqophe umlando
UMissy Elliot uqophe umlando
KUQOPHEKE umlando isihlabani somculi, umdidiyeii nomlobi wawo umculo uMissy
Elliot ephakanyiswa njengomunye wabaculi abazoncintisana koweSongwriters Hall of Fame yangonyaka ozayo.
UMissy uqokwe ngenxa yokubhala umculo nokuyinto aseyenze iminyaka engaphezu kuka-20. Phakathi kwabaculi ababhalele izingoma ezishisa izikhotha uWhitney Houston, Beyonce, Janet Jackson, Mary J. Blige Fantasia nabanye abaningi.
Bekuqala emlandweni ukuthi owesifazane ongumrepha abe sohlwini lwabaqokwe kulo mkhakha. Uma enganqoba uMissy, angaba ngumrepha wesithathu emlandweni ukufakwa kulolu hlu. Uzobe elandela uJay-Z noJermaine Dupri.
IHall of Fame ingenye yezindlela zokuhlonipha umuntu ngeqhaza lakhe elibalulekile emlandweni. Kuleli sonto iSongwriters Hall, iveze uhlu lwabaculi ababhekwe ngabomvu ukuba bahlonishwe. Emkhakhweni onabaculi kubalwe uMariah Carey, Chrissie Hynde (The Pretenders), Vince Gill, Mike Love, Jimmy Cliff, Jeff Lynne, Cat Stevens, John Prine, Lloyd Price, Tommy James neThe Eurythmics (Annie Lennox noDave Steward).
Ababhali bomculi babhekwa ngeqhaza lokubhala umculo iminyaka engu-20. Ababhali bomculi noma amaqembu abazohlonishwa abayisithupha bazomenyezelwa ngoJune 13, ngonyaka ozayo. Ukuvotela abazohlonishwa kwiHall of Fame kuqalwe kuleli sonto, kuvalwa ngoDisemba
ISIHLABANI somrepha wesifazane uMissy Elliot uqoshwe kwabangase bahlonishwe kwiHall of Fame yangonyaka ozayo Isithombe: SIGCINIWE